Jacuzzi inflatable - Fantatrao ve ny tombony lehibe azo avy amin'izany? | Bezzia
Susana godoy | 07/04/2021 16:00 | an-trano
Ny fananana jacuzzi inflatable dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny tranontsika ary mazava ho azy, ho an'ny zaridainantsika. Raha manana faritra amin'ny lafiny roa isika dia fotoana tokony hieritreretana ny fomba handravahana azy sy ny fomba tsara kokoa anaovana azy toy izay ny hevitra hoe hanolotra anao anio izahay ary tena ho tianao izany.
satria ny fananana jacuzzi no nofinofin'ny maro. Fa tsy ny filazana fotsiny hoe manana izany isika, fa satria tena misy tombony lehibe tsy maintsy raisintsika. Amin'izay ianao vao hamafa ny fisalasalana raha hividy azy na tsia, fa efa nilaza taminay izahay fa ny fanapahan-kevitra no ho tsara indrindra ho anao sy ny fianakaviana manontolo. Jereo!
1 Manao veloma ny adin-tsaina noho ny jacuzzi inflatable
2 Hanamaivana ny aretin-kozatra ianao
3 Azonao atao ny manangona na manaisotra azy isaky ny tianao
4 Hihatsara ny fisehoan'ny hoditra
5 Fitsaboana manokana amin'ny vanin-taolana
Manao veloma ny adin-tsaina noho ny jacuzzi inflatable
Na ny jacuzzi na ny spa dia karazana dobo iray izay misy miboiboika ara-pahasalamana. Ka ny iray amin'ireo tombontsoa lehibe voalohany azon'izy ireo dia ny mampihena be ny adin-tsainao. Azo antoka fa tsy misy andro ahafahanao miala sasatra tanteraka. Izany dia mahatonga ny vatana ho henjana foana noho ny asa, ny trano ary ny olana maro hafa. Noho izany, ny fandroana eo anelanelan'ny bubble dia hampihena ireo ampahany nifanarahana ireo ary ho hitanao ny fanamaivanana lehibe azo avy amin'ny famelana ny fihenjanana be any aoriana. Efa nanandrana ve ianao?
Hanamaivana ny aretin-kozatra ianao
Talohan'ny nilazantsika ny adin-tsaina ary ankehitriny zavatra mifandraika amin'ny lafiny sasany. Satria ny fanaintainana dia mety ho andiana olana fanampiny. Indrindra raha hozatra izy ireo, dia hahazo fahasalamana amin'ny jacuzzi azo aidina. Satria noho izany dia ny jet tsirairay avy izay hivoaka avy ao no hanana ny toerana ambony rehetra. Azo antoka izany amin'ny alàlan'ny fampihetsehana ny fivezivezena dia hampiala ny faritra io ary tsy handratra firy noho ny eritreretintsika. Ity dia ampahany amin'ny fitambaran'ny rano mafana sy ny fiaramanidina mavitrika. Ka minitra vitsy isan'andro fotsiny dia ho hitantsika haingana ny fivoaran'ireo fanaintainana ireo.
Azonao atao ny manangona na manaisotra azy isaky ny tianao
Io no tsara amin'ny zavatra rehetra azo angonina sy esorina, ka amin'ity tranga ity dia tsy avela ao koa. Angamba amin'ny fotoanan'ny lohataona na fahavaratra dia torohevitra foana ny hieritreritra ny hametaka azy io any ivelany, raha amin'ny ririnina dia azonao atao ny manala azy mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny. Avy amin'ny zavatra azontsika lazaina fa zavatra azo ampiharina izy io ary mahatonga azy io ho zavatra maro, toy ny itiavantsika azy. Noho izany, iray amin'ireo teboka lavorary tokony horaisina.
Hihatsara ny fisehoan'ny hoditra
Satria tsy ny tombony rehetra dia hifantoka amin'ny atitany, fa azo jerena ivelany ihany koa. Midika izany fa ny hoditra no betsaka milaza. Etsy andaniny dia ho hydrated kokoa. Izay hahatonga azy io ho malama sy ho ketrona afaka miaraka amin'izay. Ka noho izany, azo antoka fa tsy hahavita hanohitra ny fividianana jacuzzi inflatable ianao amin'ny fahalalana fa tsy ny fahasalamanao ihany no hivoatra be, fa izany rehetra izany dia ho hita avy any ivelany.
Fitsaboana manokana amin'ny vanin-taolana
Ny marina dia misy ny sasany aretina toy ny karazana taolanaTsy manana ny fitsaboana marina indrindra izy ireo. Izany hoe tsy maintsy hiaina miaraka amin'izy ireo mandritra ny fotoana maharitra isika. Fa tsy maintsy misafidy safidy tsotra foana ianao mba hahafahanao manamaivana azy ireo. Izany no antony hiresahantsika momba ny Jacuzzi. Fangaro rano sy hafanana hampiroboroboana olana ara-pahasalamana sasany, araka ny hitantsika. Marina fa hitohy ny aretina mitaiza nefa koa noho io dingana io dia hanatsara sy hahatsikaritra fivoarana miabo isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Jacuzzi inflatable: fantatrao ve ny tombony lehibe azo avy amin'izany